Saddex waxyaabood oo uu ku fashilmay maamulka Cabdi Kariin Guuleed - Caasimada Online
Home Maqaalo Saddex waxyaabood oo uu ku fashilmay maamulka Cabdi Kariin Guuleed
Saddex waxyaabood oo uu ku fashilmay maamulka Cabdi Kariin Guuleed
Madaxwayne Cabdi Kariin Xuseen Guuleed ayaa qeyb ka ah madaxweyne goboleedyada hoostaga dowlada federaalka Soomaaliya, waxaase lagu xantaa in uu kamid yahay xerta Xasan Sheekh Maxamuud uu jaanta ku wato.
Balse dadka naqdiya siyaasad Guuleed ayaa sheega in uu yahay nin afgaaban oo aan cadkiisa wax badan ka dhacsan karin, xilli qolyaha uu ka dhashayna ay yihiin dad aan qaboobeyn oo cad goosiga ku wanagsan.
Waxaase ay idin soo gudbinaysaa Shabakada Caasimadda oo aad ugu baratay daba galka dadka caanka ah iyo xaqiiqooyinka siyaasada gudaha, Saddex Waxyabood oo uu ku dhacay Guuleed in uu kasameyo Galmudug tan iyo markii la doortay.
Sheekh Maxamed Shaakir ayeey ku andacoodaan Ahlu Sunnah in uu yahay madax waynahooda, taas oo la micna ah in aysan u riyaaqsaneyn taliska Cadaado fadhigeedu yahay.
2) Xalinta Dagaalada Soo Noq Noqday Ee Gaalkacyo
Tan iyo markii Cabdi Kariin Xuseen Guuleed loo magacaabay Maamulaha Xukuumad goboleedka Cadaado waxaa soo noq noqday dagaal beeleed yada u dhexeeya Puntland iyo Galmudug, taas oo aan la arag xal rasmi ah oo laga gaaray.
Qalinkii Cabdi Wahaab Axmed Cali